Xa abantwana bedlala ngaphandle - ukuziphatha okufanelekileyo ngexesha lokuduma kweemvula
Ndiziphatha njani ngexesha lokuduma kwezulu?
Ukuziphatha kakuhle ngexesha lokuduma kwezulu: Ungaze ube yindawo ephakamileyo
Ukuziphatha ngexesha lokuduma kweentaba ezintabeni
Umbuzo womntwana oqhelekileyo ngamnye umama okanye utata kufuneka aphendule ngexesha lokukhulisa abazali. Umbane kunye neendudumo ziyimiphumo emibi yecala lokuduma kwezulu.
Sonke sinamava - kodwa wngasentla kuphuma umbane kunye neendudumo?
Ndidla ngokuthandazela ukuba ibinzana phantsi njenge-litany ukuze ndiqinisekise intombi yam, ohlala ehlaselwa xa kukho iindudumo ehlobo.
Ukuziphatha okufanelekileyo ngexesha lokuduma kwezulu kufuneka kwaziwe!
kodwa Kuvelaphi umbane neendudumo? ngokwenene? Umbane awuyikho ngaphezu kokukhutshwa kombane. Iindudumo ziqukethe amaza okuvakalayo kunye nokuphuma kombane.
Uphantse uva umbane, ukukhupha, njengombengezelo. Kuvelaphi umbane neendudumo? ngokuqinisekileyo kuya kuba ngathi: kutheni kubakho ukukhanya nokuduma.
Ukuqhwithela ngombane kunye neendudumo
Ehlobo, ilanga liyatshisa umoya omanzi kufuphi nomhlaba. Umoya ofudumalayo wenyuka njengoko ukhanya kwaye ufike kwindawo ejikelezayo kwindawo ethile esibhakabhakeni. Oku kubiza ukwahlukana (kubanda / kushushu) kwakha umbane wombane, oya kuthi, xa unamandla kakhulu, ngefowuni kunye ne-timpani kunye nezigodlo - iindudumo! - ukhulula.
Kuvelaphi umbane neendudumo? Ngoko oku kuya kucaciswa. Zibangelwa ukunyanzelisa kwiindawo eziphakamileyo. Ngokuqinisekileyo, le ntlawulo yombane ifikelele kwi-volts enye yezigidi. Ukuba i-flash ikhupha, amazinga okushisa angama-30,000 degrees ayenzeka. Oku kuphefumula umoya, ophuma ngokukhawuleza kwaye emva koko uvelise amaza omsindo.
Ukuzisa ulwazi ngesihloko:
iphepha lokubala elibala kunye nesihloko sezulu
Xa ebuzwa: Lapho kuvela khona umbane neendudumoNgoko omnye uthetha ukuba zombini iziganeko ze-pent-up kunye nokukhupha ingxabano esibhakabhakeni.
Ukuziphatha kakuhle ngexesha lokuduma kweendudumo okunene ugqiba ngamanye amaxesha phakathi kobomi nokufa. Ingakumbi abantwana badlale ngaphandle lukhulu, ngoko qiniseka ukuba bayazi imithetho ibalulekileyo. Iindudumo zivame ukuza kumangaliswa, kwaye nangona abantwana bahlala bexelelwe ukuba bafike ekhaya ngexesha, kunokuthi kwenzeke ukuba isiphepho siphephe kunokuba singasabela.
Indlela yokuziphatha ngokufanelekileyo xa kuduma ukhona? Kukho nawuphi na: hlalani. Oku akulula kubantwana abaxhalabileyo. Imigaqo ingaba yinkxaso kuwe ukuziphatha kakuhle ngexesha lokuduma kweendudumo kwaye ungaphepheki.
Isibane sibetha kakhulu kwindawo ephezulu ekhoyo kwimeko yawo. Ngoko umthetho olula ufanele ube mncinci. Ungaze ube yindawo ephakamileyo kwindawo. Emoyeni evulekile kubalulekile ukukhusela imithi ekhethiweyo, ama-masts, izicingo zensimbi, njl njl.
Yazisa abantwana bakho ngexesha elifanelekileyo malunga nokuziphatha kakuhle ngexesha lokuduma kweendudumo
real Ukuziphatha ngexesha leendudumo Ngaloo ndawo ingenanto kufuneka ukuba ufune indawo engasisigxina kunye ne-squat. Umgangatho awungaze uthinteke phezu kwendawo enkulu kunye nomzimba, iinyawo mazibe sisondelene ndawonye kwi-squat, zibeke iingalo kwi-squat emilenzeni.
Umbane owela emhlabathini, obizwa ngokuthi uphuma kwaye ngoko unxibelelwano oluncinci.
Iphuzu lesibini: gwema amanzi! Amanzi aqhuba kakuhle umbane. Kwaye intloko ihlala ilona nqanaba eliphambili xa ibhukuda elwandle! Ngoko ke kufuneka uphume ngamachibi okuhlamba, amachibi, imilambo njl Abantwana kufuneka baqonde ukuba bafuna umgama okhuselekileyo kuwo onke amanzi. Njalo ukuziphatha okufanelekileyo ngexesha lokuduma kweendudumo.
Izandla zicima iintambo zentambo kwaye zifune indawo yokukhusela phakathi kwamadwala aphantsi. Ekwindla, abantwana bafanele babuyisele kwakhona ama-kite, kuba bakhawuleza baba yindawo ephakamileyo - nangona ukuba umoya ohamba phambili kwisiphepho uqhubeka unxenga!
Ukuziphatha kakuhle ngexesha lokuduma kweendudumo ehlathini kunzima. Kukho ezizezi kakhulu iindawo impembelelo ukukhanya. Kwakhona, imisele okanye iindawo amahlathi ujonge azigobe nzulu phantsi, kuphephe imithi emide kunye ngokubanzi ningalufuni yokuhlala phantsi kwemithi, khetha ngcono nakuthango.
Uhlobo lwebala lokuduma